देउवालाई सर्वसम्मत हुन नदिन पौडेल पक्षकोे यस्तो तयारी, कसको पक्षमा कति सांसद ? | mulkhabar.com
देउवालाई सर्वसम्मत हुन नदिन पौडेल पक्षकोे यस्तो तयारी, कसको पक्षमा कति सांसद ?
March 3, 2018 | 7:23 am 237 Hits
नेपाली कांग्रेसमा संसदिय दलको नेता को बन्ने भन्ने विषयले झगडाको स्थिति पैदा भएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले आफैं दलको नेता हुन खोजेपछि उनलाई सर्वसम्मत बन्न नदिन र दलको नेता हुन बाट रोक्नको लागि कांग्रेसमा विभिन्न चलखेल हरु भएका छन् भने उनको विरुद्ध पुर्व महामन्त्री तथा गणेशमान पुत्र प्रकाशमान सिंहले उम्मेदवारी नै दिने सार्वजनीक गरेका छन् ।
यस सम्वन्धमा आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार प्रकाशीत भएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । यद्यपि, सर्वसम्मत रूपमा दलको नेता चयन गर्न नेताहरूबीच भेटघाट र छलफल जारी छ ।
कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट प्रत्यक्षमा तीनजना निर्वाचित भएका थिए । जसमा गगन थापा, उमाकान्त चौधरी र भीमसेनदास प्रधान छन् । दलको नेता निर्वाचनमा भने सिटौला पक्षमा विभाजन आएको छ । स्रोतका अनुसार सांसद थापा कतै खुलेका छैनन् भने चौधरी र प्रधानले देउवालाई सहयोग गर्ने भएका छन् ।
कांग्रेसले संसदीय दलको नेतामा उम्मेदवारी दर्ता शुल्क ४१ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । निर्वाचनको दिन सचिवालय खर्च जुटाउन उक्त परिमाणको शुल्क तोकिएको पार्टी कार्यालयका सचिव प्रेम केसीले जानकारी दिए । ‘निर्वाचनको दिन आवश्यक पर्ने स्टेसनरी खर्च, कर्मचारीका लागि खाजा खर्च जुटाउन त्यति शुल्क तोकिएको हो,’ उनले भने । निर्वाचनपछि कांग्रेसले सांसदबाट लेबी लिएको छैन । दलको नेता चयनपछि मात्र कांग्रेसले पार्टीलाई लेबी बुझाउन संघीय संसद् सचिवालयमा पत्र लेख्ने केसीको भनाइ छ । विगतमा कांग्रेसले प्रत्येक सांसदबाट पाँच हजार रुपैयाँ लेबी लिने गरेको थियो । कांग्रेसमा प्रतिनिधिसभामा ६३ र राष्ट्रिय सभामा १३ गरी ७६ जना सांसद छन् ।
कांग्रेसले संघीय सांसदको शपथपछि मात्रै दलको नेता चयन गर्न लागेको हो । सत्तारुढ एमाले र माओवादी केन्द्रले सांसदले शपथ नै नलिईकनै दलको नेता छनोट गरेका थिए । कांग्रेसले भने सांसद पदको शपथपछि मात्र दलको नेता चयन गर्न वैधानिक हुने जिकिर गरेको छ । कांग्रेसले बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीमा सांसदको शपथग्रहण नगरी कुनै पनि सदस्य संसदीय दलको नेता वा कार्यसमिति सदस्य हुन नसक्ने भन्दै सांसदको शपथपछि मात्र दलको नेताको निर्वाचन गर्न लागेको सचिव केसीले बताए ।
मतदाता नामावली प्रकाशन : २० फागुन,
प्रतिनिधिसभाको नेताले राष्ट्रिय सभाको नेता तोक्ने
राष्ट्रिय सभामा भने दलको नेता प्रतिनिधिसभाको संसदीय दलको नेताले नै तोक्ने कांग्रेस संसदीय दलको विधानमा छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाको प्रमुख सचेतक प्रतिनिधिसभाको प्रमुख सचेतकको सिफारिसमा संसदीय दलको नेताले नै चयन गर्ने व्यवस्था छ ।
पौडेल पक्ष छलफलमा व्यस्त
पौडेल पक्षले सांसद भेटघाटलाई तीव्रता दिएको छ । अहिलेसम्म कतै नखुलेका सांसद विनोद चौधरीले सिंहलाई मत हाल्ने पौडेल पक्षका एक नेताको दाबी छ । पौडेल पक्षले आफ्नो पक्षको २४ मत आउने दाबी गरेको छ । खुमबहादुर खड्का पक्षले पनि अन्तिममा सिंहलाई सहयोग गर्ने पौडेल पक्षको आकलन छ ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले आज पनि संसद अबरुद्ध गरेको छ । सरकारले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विद्येयक जबरजस्ती…